Maqaarka ku fiican guriga
Inta badan haweenka ayaa u maleynaya inay suurtagal tahay in ay noqoto milkiilaha maqaarka ugu fiican adoo u weel ku leh kareemka qaaliga qaaliga ah, waana ka fiicnaan haddii gurigeeda oo dhan ay sameeyeen kiriimyada noocaan oo kale ah oo abuuray alaab aan caadi aheyn, xayeysiisuna waxay nagu ballan qaadaysaa quruxda iyo dhalinyarada weligeed ah. Tani waa khaldadka ugu weyn ee dumarka reer Ruushka ah. Cunto caafimaad leh, maqnaansho fiican oo gurigaaga ah ayaa laguu siiyaa, haddii aad daawato caafimaadkaaga, hoggaaminta, wax badan oo yar ama habka ugu haboon ee nolosha, nasashada, ogsoonow sida looga takhaluso walaaca, jimicsiga, iyo dabcan, isticmaal kiriimka iyo kiriimyada daryeelka maqaarka. Marka la eego dhamaan qodobada kor ku xusan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku siino talooyin dhawr ah oo kaa caawin doona inaadan maqlaynin maqaarka, laakiin sidoo kale xoojinta caafimaadka.
Hurdad caafimaad leh waa dammaanad qaadasho caafimaad leh. Midkeen kasta wuxuu leeyahay caadigeena hurdo u gaar ah: qof ayaa u baahan inuu seexdo 12 saacadood, qof ayaa u baahan 5-6 saacadood inuu dareemo farxad iyo nasasho subaxdii. Tan ugu muhiimsan, ma ahan inta saacadood ee aan hurdeyno, laakiin sida. Si aad u seexato wuxuu ahaa mid xoog badan oo u keenaya quruxda ugu badan, waxaanad u baahan tahay inaad qolka ku nasto inta aadan sariirta aadin, waxaad qubeysan kartaa qubeys ama qubeys diirran, habeenkiina waa ka fiicnaan inaadan samayn jimicsiga jirdhiska, daawada TV-ga iyo si qarsoodi ah. Hurdo ayaa degi doonta markaad leedahay sariir raaxo leh, ma aha barkin aad u jilicsan iyo joodar dhexdhexaad ah. Maqaayada ugu fiican waa suurtogal keliya haddii aadan dayacin hurdada.
Sida aad cunaysid marwalba waxay ka muuqataa maqaarkaaga. Isku day inaad guriga u cuntid khudradda iyo miraha aad u badan, dufan yar, saliideed iyo saliid. Maahan lagama maarmaan si aad u noqoto cunto khudradeed oo aad u culus, waxaad si tartiib tartiib ah u beddeli kartaa alaabta qudaarta iyo kalluunka. Cab biyo badan intii suurtagal ah, cabitaanno cusub oo la jarjaray, shaah cagaaran. Haddii jirkaaga uu leeyahay dheecaan ku filan oo dheecaan ah, markaa beerkaaga ayaa ka saara sunta sunta, sunta waxyeeleysa caafimaadkaaga. Fuuqbaxa la'aanta jirku wuxuu isla markiiba muuqan doonaa maqaarka qalalan, maqaarka, xayawaanka aan lahayn, timaha cirridka. Qiyaasta cabitaannada dareeruhu waa 1-1.5 litir maalintii, xilliga kulul ilaa 2, 2, 5 litir. Iyo, dabcan, waxaad ubaahantahay inaadan hilmaamin fitamiinada. Caafimaadka dumarka, fiitamiinada A, B, C, D ayaa si gaar ah muhiim u ah - qadar ku filan oo ka mid ah walxahan ku jira jirka ayaa ku siin doona maqaarka quruxda leh, shucaac, timo adag iyo ciddiyo adag.
Jimicsiga jirka ma aha oo kaliya faa'iido badan, laakiin sidoo kale maqaarkaaga. Markaad ku dhex jirto cayaar kasta, jirkaaga wuxuu isticmaalaa muruqyada oo dhan, oo ay ku jiraan wejiga. Maqaarka waafaqsan xaaladaha dhaqdhaqaaqa jireed wuxuu hagaajiyaa. Haddii muruqyada ku jira codka - hagaajinayaan wareegga dhiigga, boogta caafimaad leh ayaa ka muuqda, laalaab yar yar oo wejiga ah ayaa ka baxsan. Waxa ugu muhiimsan, ha iloobin in ay ka soo qaadaan kookhoolajiyada inta lagu jiro ciyaaraha iyo tirtir wejigaaga marada qoyan ama biyaha.
U fiirso hababka biyaha . Haddii aanad haysan wax khilaaf ah, markaa waxaa lagula talinayaa in aad soo booqatid sauna ama saunada ugu yaraan toddobaadkii mar ama ugu yaraan hal mar bishii. Qof walba wuu ogyahay sifooyinka mucjisada ee nidaamyadan, marka dillaacuhu furmo, maqaarku wuxuu helayaa qoyaan dheeraad ah, kulaylku wuxuu hagaajiyaa wareegga dhiigga, sidaa daraadeedna wuxuu kor u qaadaa geeddi-socodka gubista, iyo waliba waxkasta - unugyada dhintay ayaa u dhintaan waxayna u oggolaadaan maqaarkaagu inay noqdaan kuwo shucaac leh oo cusub. Haddii ay jiraan waxyaabo ka hortag ah, markaa waxaad diyaarin kartaa qol yar-yar oo guriga ku yaala qubeyska ama musqusha, adigoo isticmaalaya timaha jirka, dabiiciga ah, sida malab, iyo casriyeyn kala duwan oo ku habboon nooca maqaarkaaga gaarka ah. Waxaad tagi kartaa barkadda ugu yaraan toddobaadkii hal mar, kaas oo kuu oggolaanaya inaad bedesho fasalada xarunta jirdhiska. Natiijadu waxay noqon doontaa wax yar oo wax ku ool ah, sababtoo ah biyaha ayaa runtii leh saameyn bogsasho leh oo ku saabsan dhammaan xubnaha jidhkeena, taas oo noo ogolaaneysa inaan eegno 100.
Cadaadiska waa cadowga ugu weyn ee quruxdaada. Xaqiiqdii waxaad ogaatay marka aad qabto diiqad ama xaalad kacsan ee shaqada, guriga, waxaad u ekaaneysaa daal, niyadjab iyo xitaa haddii jiran yahay. Dareenka xun wuxuu gacan ka geystaa horumarinta hormoono gaar ah, kaas oo u gudbiya macluumaadka jirkeena si aad ah ula mid ah marka aan ku xanuunno, tusaale ahaan, hargab caadi ah. Taasi waa sababta, waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusto walaaca, hana haawin oo ha isku ururin tamarta taban. Taas waxaad u tegi kartaa xawaare, dhageysiga muusikada nasashada, daawada filinkaaga ugu xiisaha badan, boodada ku dhufo, samee nadiifinta iyo wixii la mid ah. Waxaad u baahan tahay inaad u dirto tamar taban oo gabi ahaanba ka duwan kan kale, si aysan kuu oggolaan inaad adigu hoggaamiso unugyadaada si loo burburiyo.
Qof kasta oo naga mid ah waa ogyahay waxa ay u baahan tahay si shakhsi ahaan ah inuu mar walba iftiimiyo oo uu kula yaabo dadka kale oo leh muuqaal ku habboon, maqaarka, timaha iyo dhamaan muuqaalkeeda si aad u muujiso inaad tahay qof caafimaad qaba oo guuleysta oo buuxa xoog iyo miro. U sheeg talo-bixinteena inay kaa caawiso buuxinta cuntooyinkaaga quruxda, marka loo eego maqaarka saxda ah.
Sifooyinka muhiimka ah ee socodka quruxda badan
Maxaa ku dhaca maqaarka wejiga habeenkii?
Daryeelka gacanta, daaweynta dadka
Qarsoonaanta quruxda ee ka timaada qaababka sare
Maxay u horseedi kartaa cunista shukulaatooyin badan?
Burka quruxda badan leh boqoshaada Portobello
Waa maxay faraqa u dhexeeya da'da u dhaxaysa nin iyo haween waa caadi
Canaanshaha on Grill
Kukiyada sonkorta leh
Waa maxay waxyaalahaan la iiga qaadayaa isbitaalka?
Cuntada beerta: cirridka ubaxa - isweydaarsi cusub
Maxaad fiirineysaa marka aad guri iibsaneyso suuqa labaad?
Hooyooyinka ilmaha badanaa waxay ka cabanayaan cunnooyinka saboolka ilmaha
Daaweynta diathesis ee daaweynta dadweynaha
Ficilku ma laha xaddidaad: sida loo doorto caarada saxda ah
Isku-qabso kalluunka iyo fiiqda
Qodobka loogu talagalay roodhida tufaaxa
Sidee baad u cuni kartaa miisaankaaga?
Dareemaa eggplant iyo zucchini
Waxyaabaha keena xasaasiyadda carruurta
Waa maxay sababta aan cunin 18 saacadood ka dib
Maxaa keena maqaarka macdanta jirka